Rotterdam The Hague mankany Milan Bergamo ao Transavia izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Rotterdam The Hague mankany Milan Bergamo ao Transavia izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Italia • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Sidina avy any Rotterdam The Hague mankany Milan Bergamo ao Transavia izao
Manangana serivisy intelo isan-kerinandro in-telo na efatra heny amin'ny tanàna faharoa lehibe indrindra any Holandy amin'ny fahavaratra ho avy izao, ny mpitatitra vola any Holandy dia hampiakatra be ny sarintany misy an'i Milan Bergamo mankany Eropa avaratra andrefana.
Transavia dia manomboka rohy mankany Rotterdam The Hague Airport avy amin'ny seranam-piaramanidina Milan Bergamo.
Rotterdam dia ivon-toeran'ny lojikajika sy toekarena lehibe ary fanampiana lehibe ho an'ny tambajotra Milan Bergamo.
Ho an'ny mpiara-miombon'antoka fiaramanidina vaovao hanaiky ny mety ho tsena dia marika manamarika ny fahaizan'i Lombardy sy ny fangatahana mitombo.
Ny seranam-piaramanidina Milan Bergamo dia nanambara ny fanombohan'ny fifandraisan'i Transavia amin'i Rotterdam The Hague, izay manamarika ny fanampiana ny zotram-piaramanidina vaovao fahatelo amin'ny vavahady Lombardy tato anatin'ny volana vitsivitsy. Manangana serivisy telo ka hatramin'ny efatra heny isan-kerinandro amin'ny tanàna faharoa lehibe indrindra any Holandy amin'ny fahavaratra ho avy izao, hitombo be ny mpitatitra vaventy holandey Milan BergamoSarintany mankany Eropa avaratra andrefana.
Giacomo Cattaneo, talen'ny sidina avaratry ny varotra, SACBO dia nilaza fa: "Toerana misy ny seranana lehibe indrindra any Eropa, Rotterdam dia ivon-toerana lojika sy toekarena lehibe ary fampidirana lehibe ao amin'ny tambajotranay. Mba hahafantaran'ny mpiara-miombon'antoka fiaramanidina vaovao ny fahafahan'ny tsena dia marika manamarika ny fahaizan'i Lombardy sy fitomboan'ny fangatahana. ”
Manatevin-daharana ny serivisy napetrak'i Milan Bergamo ho an'i Eindhoven, ny fandefasana ny rohy Transavia amin'i Rotterdam dia hanome ny mpizara vondrona Air France-KLM anjara 30% amin'ny tambajotram-piaramanidina Holandey. Manolotra sidina 300 manakaiky ny Netherlands amin'ny fahavaratra manaraka izao, ny faritra Lombardy dia hanana fifandraisana lehibe amin'ny toekarena fahafito lehibe indrindra any Eropa amin'ny alàlan'ny harin-karena faobe.
Marcel de Nooijer, Transavia CEO, hoy izy: "Matoky izahay fa hiandry ny fahavaratra taona 2022 ary faly amin'ny fanampiana ny fifandraisanay vaovao amin'i Milan Bergamo. Izany dia ahafahantsika manohy mamaly ny fanirian'ireo mpandeha izay te hahita toerana vaovao. Tamin'ity fahavaratra ity dia hitantsika fa ny Holandey dia maniry ny handeha indray, ohatra amin'ny fialantsasatra na hamangy fianakaviana. Hitanay fa miakatra ny famandrihana amin'ity fararano ity ary manantena mafy koa isika amin'ny ririnina. Manantena izahay fa hitondra an'io ezaka io hatramin'ny fahavaratry ny 2022. ”
Rotterdam Ny seranam-piaramanidina Hague (seranam-piaramanidina Rotterdam taloha, Vliegveld Zestienhoven amin'ny fiteny holandey), seranam-piaramanidina iraisampirenena kely manompo any Rotterdam, tanàna lehibe indrindra faharoa any Holandy ary The Hague, renivohiny ara-pitantanana sy mpanjaka. Any amin'ny 3 NM (5.6 km; 3.5 mi) avaratra avaratra andrefan'ny Rotterdam any Hollande no misy azy ary io no seranam-piaramanidina be mpandeha indrindra fahatelo any Pays-Bas.
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Orio al Serio, nasiana marika hoe Seranam-piaramanidina Milan Bergamo, no seranam-piaramanidina iraisampirenena be atao indrindra eto Italia. Any amin'ny faritany monisipaly any Orio al Serio no misy azy, 3.7 km atsimoatsinanan'ny Bergamo any Italia.